आन्तरिक हवाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, कुन गन्तव्यको अधिकतम भाडा कति?
नेपाल लाइभ शनिबार, चैत ८, २०७६, ११:५०
काठमाडौं– कारोना भाइरसको जोखिम न्यूनकरणका लागि भन्दै सरकारले भोलिदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान १० दिनमा लागि बन्द गर्ने भएको छ। तर, आन्तरिक हवाई उडान भने बन्द हुने छैनन्। लामाे दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन पनि १० गतेबाट बन्द हुने भएपछि आन्तरिक हवाई यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या बढ्न थालेको छ।
केही दिनदेखि सुनसान भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवन फेरि खचाखच जस्तै भएको छ। काठमाडौंबाट बाहिर जाने यात्रुकाे संख्या बढेको छ भने आउनेको संख्या भने कम छ।
काठमाडौंबाट बाहिरीने यात्रुको संख्या बढेसँगै एयरलाइन्स कम्पनीले सबैभन्दा मंहगो फेयरको भाडामा मात्रै टिकट बेच्न थालेका छन्। केही दिन अगाडिसम्म विराटनगको भाडा २ हजार ५ सय रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको अवस्थामा पुनः ७ हजार ४ सय ४० रुपैयाँकाे हाराहारीमा टिकट पुगेपछि एयरलाइन्स कम्पनीले भाडा बढाए भनेर विरोध हुन थालको छ।
निजी वायुसेवा कम्पनीको छाता संगठन नेपाल वायुसेवा अपरेटर संघका प्रवक्ता योगेन्द्रराज कडेँलले भाडा नबढको तर, सरकारकबाट नै स्वीकृत भएको सबैभन्दा मंहगो फेयरको भाडा लिएको बताए।
कुन गन्तव्यमा कति भाडा? (रुपैयाँमा)